Kyaw Hein, Author at Chelmo News Portal - Page 16 of 18
Home›Author: Kyaw Hein (Page 16)
ဟဲ့၊ ဘေးအိမ်က ဖြူလေးက တော်တယ်နော်။ အရွယ်ကောင်းတုန်းလက်ထပ်ပြီးတော့ ကလေးလည်းရနေပြီနော်။ ငါကတော့ဟယ် ….. ငါကတော့ အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆိုရင် အစပ်မတည့်ပါဘူးကွယ်။ ဘာလို့လဲ၊ သူနဲ့ရန်များ ဖြစ်ဖူးလို့လား ??? ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟယ် … ငါက အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ်လို့ ပြောတော့ … သူက “ကောင်းတာပေါ့၊ သူများတွေ ဘာပဲပြောပြော ဂရုမစိုက်နဲ့လို့” ...
Stay Home ဆိုနေတော့ AB သွေးအမျိုးတွေ အိမ်မှာဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ ၀၁. အစွဲအလန်းကြီးသူတစ်ယောက်ပါ။ အိမ်တွင်းမှာ အကုန်လုံးပြီးမယ့် ဝါသနာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဒီဟာကိုပဲ အသဲအသန်း လုပ်ပြီးရင်းလုပ်နေမှာပါ။ ၀၂. စိတ်ထဲပေါ်လာရင်ထလုပ်။ သာမန်အချိန်တွေမှာလုပ်လေ့မရှိတဲ့အရာတွေကို၊ တခုပြီးတခု လုပ်သွားမှာပါ။ လုပ်ရင်လည်း မပြီးပြီးအောင် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ၀၃. စိတ်ထဲပေါ်လာရင် ...
Stay Home ဆိုနေတော့ B သွေးအမျိုးတွေ အိမ်မှာဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ ၀၁. ရုတ်တရက်ကြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးတွေ ထလုပ်။ ဘာဖြစ်တာမှန်းမသိ၊ ရုတ်တရက်ကြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးကို အကွက်ကျကျ ထလုပ်တတ်ပါတယ်။ သူက သန့်ရှင်းရေးသိပ်မလုပ်၊ ဖြစ်သလိုနေတတ်ပင်မယ့်လည်း လုပ်ပြီဆိုရင် သေချာလုပ်တတ်ပါတယ်။ ၀၂. လက်ပန်းကျတဲ့အချိန်အထိ လုပ်တယ်။ ဂိမ်းကစားရင်လည်း ဂိမ်းတမျိုးကို ...
အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတောအတွင်း ပိုက်ဆံလဲအများကြီးကုန်စရာမလိုတဲ့ Homemade Hand Gel လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလဲ အများကြီးမလိုတဲ့ အပြင် လုပ်ရတာလဲ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ 1.အရက်ပြန်ကို များများထည့်ပါ။ 2.ပြီးရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်Gel အနည်းငယ်ကိုရောထည့်လိုက်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ဖက်ထည့်ထားတော့ အသားအရေကိုလဲ ထိန်းသိမ်းထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်နော်။ 3.အရက်ပြန်ကြောင့် အသားခြောက်တာတွေ၊ အသားအရည်ပျက်စီးတာတွေ ပြန်ကာကွယ်တဲ့ ...
Online Meeting မှာ အာလူး ဘောစိ ဖြစ်သွားသူ
Corona Virus ကြောင့် အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်ကြတော့ အခက်အခဲလေးတွေ ကြုံရတဲ့အထဲမှာ ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
(၂၀၁၉)ကနေ (၂၀၂၀) အတွင်း အချမ်းသာဆုံး ကိုရီးယားမိန်းကလေး Idol တွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်.. 10. Jennie Kim ထိပ်တန်းမိန်းကလေးအဆိုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BLACKPINK ထဲက Jennie လေးက ပိုင်ဆိုင်မှု $11 Million ရှိပါတယ်။ 9. Lisa BLACKPINK ထဲက Lisa ...
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့သူက ကိုယ့်ကိုသဘောကျနေတာကို မသိတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုမလွယ်တဲ့အရာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အပြုအမူ အပြောအဆိုကနေတဆင့် သူ့စိတ်ကို ခန့်မှန်းလို့တော့ရပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့သူကရော ကိုယ့်ကိုသဘောကျနေမလားဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလိုက်ရအောင်နော်။ ၁.မျက်လုံးချင်းခဏခဏဆုံသူ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသဘောကျပြီဆို သူနဲ့အမြဲ မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ကြိုးစားပါတယ်။ မသိမသာခိုးကြည့်တတ်ပြီး မျက်လုံးချင်းဆုံသွားရင် ချက်ချင်းပြန်လှည့်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုခဏခဏလုပ်တတ်ပြီး မျက်လုံးချင်းဆုံနေကြဆို ...
အခုဆိုနွေရာသီထဲဝင်နေပြီဖြစ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေကို နေရောင်ကြောင့်ပျက်စီးမသွားရအောင်ဂရုစိုက်သင့်ပြီး skincareကိုလည်း ပုံမှန်လုပ်သင့်ပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့်နွေရာသီမှာ ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1.Sunscreenမမေ့ပါနဲ့ နွေရာသီလည်းဖြစ်တယ် Sunscreenကလည်း Skincareလုပ်တဲ့နေရာမှာ မပါမဖြစ် ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မထွက်ရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်Skincareအပိုင်းမှာ Sunscreenကလိုအပ်ပါတယ်။ 2.Moisturizer တကယ်လို့အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေဖြစ်နေရင်တောင် Moisturizer ကိုတော့မလိမ်းပဲမနေသင့်ပါဘူးနော်။ နွေရာသီလို ပူတဲ့ရာသီမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေက ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။ ...